Privacy - Buddhatrends
Iyi Dare Rezvinyorwa inotsanangura kuti mashoko ako ega ega akaunganidzwa sei, anoshandiswa, uye akagoverwa paunoshanyira kana kutenga kubva pawww.buddhatrends.com ("Site").
ZVINHU ZVINOKUDZIDZA TINOGONA
Kuwedzerwa, kana iwe uchiita kutenga kana kuedza kutenga kuburikidza neSiti, tinounganidza mamwe mashoko kubva kwauri, kusanganisira zita rako, kero yekubhadhara, kero yekutumira, ruzivo rwekubhadhara kusanganisira nhamba dzekadhi rechikwereti, kero ye email, uye nhamba yefoni. Isu tinotaura nezvemashoko aya se "Mutemo Wenyaya".
TINOSHANDISA SEI KUTI MUNHU WAKO AKAZA?
- Cherechedza mirairo yedu yezvingangova nengozi kana unyengeri;
KUVARIDZA KUTI MUNHU WAKO ANOGONA
Pakupedzisira, tinogonawo kugovera Mashoko ako ega ega kuti titevedze mitemo nemitemo inoshanda, kuti tibvumirane ne subpoena, kutsvaga mvumo kana zvimwe zvikumbiro zvepamutemo zvemashoko atinowana, kana kuti kudzivirira dzimwe kodzero dzedu.
Iyo Site haina kuitirwa vanhu vari pasi pezera remakore 18
Kuti uwane mamwe ruzivo pamusoro pemigariro yedu yega, kana uine mibvunzo, kana iwe uchida kunyunyuta, tapota tibvunze ne e-mail pa support@buddhatrends.com kana nekutumira uchishandisa tsanangudzo iri pasi apa: